Yaa ku soo baxay doorashada Kuraasta Aqalka Sare ee Galmudug | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Yaa ku soo baxay doorashada Kuraasta Aqalka Sare ee Galmudug
Yaa ku soo baxay doorashada Kuraasta Aqalka Sare ee Galmudug
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ka dhacday doorashada lix kamid ah kurasta Aqalka Sare, waxaana ku tartamayay 12 musharax oo uu soo gudbiyay Madaxweynaha Galmudug.
Kursiga koowaad ayaa waxaacCod gacan tag ah ay xildhibaannada Galmudug ugu codeeyeen Siciid Siyaad Shirwac oo ka mid ahaa Golaha Wasiirada Galmudug ka dib markii uu u tanaasulay Maxamed Daahir Maxamed oo la tartami lahaa, balse doorashada ka haray.
Kursiga labaad ayaa waxaa cod gacan tag ah ay xildhibannada Galmudug ugu codeeyeen Senator Yuusuf Geella Ugaas oo Afartii sano ee la soo dhafay kursigan ku fadhiyay si la mid ah markii uu tartanka isaga haray Daahir faarax fiidow oo mar wasiir ku xigeen ka soo noqday Galmudug.
Kursiga Shanaad ayaa waxaa cod gacan taag ah ay xildhibaannada Galmudug ugu codeeyeen Senator Cabdi Xakiim Macalin Axmed oo Afarsii sano ee la soo dhaafay ka tirsanaa Golaha Shacabka balse u soo wareegay Aqalka Sare kadib markii ay u tanaasushay Ismahaan Cabdi Xussen.
Kursiga ugu dambeeya ee doorashadii maanta ka dhacay Dhuusamareeb ayaa waxaa cod gacan taag ah ay xildhibaannada Galmudug ugu codeeyeen Senator Duniyo Maxamed Cali oo Afartii sano ee la soo dhaafay ka tirsaneyd Golaha Shacabka balse u soo wareegtay Aqalka Sare kadib ay u tanaasushay Musharax Khadra Cabdhlahi Isxaaq.
Previous articleDowladda Afghanistan oo codsatay in Taliban ay la qeybsato awooda
Next articleDHAGEYSO:Ra’iisul wasaaraha Somalia oo laga codsaday inuu booqdo xeriyaha qaxootiga ee Dadaab